नक्कली डाक्टर तह लगाउने हिरो डिआईजी नवराज सिलवाल अब नक्कली डाइभर, शिक्षक, पाइलट,इन्जिनियर तिर ~ Khabardari.com
नक्कली डाक्टर तह लगाउने हिरो डिआईजी नवराज सिलवाल अब नक्कली डाइभर, शिक्षक, पाइलट,इन्जिनियर तिर
1:26 PM admin No comments
नक्कली डाक्टर तह लगाइ मिसन् बाट नेपालीका हिरो निस्किएका डिआईजी नवराज सिलवाल अब नक्कली डाइभर, शिक्षक, पाइलट,इन्जिनियर, वकिल तिर क्रमस लाग्ने कसैलाई नि नछोड्ने बताएका छन् ।
सबै चिकित्सकको नक्कली प्रमाणपत्रको अनुसन्धान हुन्छ ?
– नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट चिकित्सकको रुपमा काम गर्न अनुमति लिएका सबैको शैक्षिक प्रमाणपत्रको अनुसन्धान हुन्छ ।
नक्कली देखिएकालाई कारबाही नगरी काउन्सिलको नम्बर खारे गरे हुन्न ?
–कसैले झुक्याएर काउन्सिलबाट अनुमति लिए पनि चिकित्सकीय अभ्यास गरेको छै भने ऊ आफैले निवेदन दिएर खारेज गराए सम्भव छ । तर झुक्याएर अनुमति लिए चिकित्सककको रुपमा काम गरेकाहरुको हकमा यो सम्भव छैन । गलत काम गर्ने सबै अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् । कान्तिपुर दैनिकबाट